OGAALKA SOOMAALI­-WEYN Q5aad.W|Q C.NAASIR GURAY MEECAAD. |
OGAALKA SOOMAALI­-WEYN Q5aad.W|Q C.NAASIR GURAY MEECAAD.
Waxaa halkii inooga sii socda maqaaladeennii aan kaga hadlaynay,Ogaalka Soomaali weyn
qaybtii Gumaysigii Talyaaniga ee Koonfurta Soomaaliya
Soomaaliya, gobollada uu hubku sida xooggan ugu baahsanaa waxay ahaayeen gobolladii uu Talyaanigu doonayay in uu gumeysto. Inkasta oo dadka Soomaalida ah ayan xilligaas diyaar u ahayn in ay wareejiyaan xoogaaga yar ee hubka ah ee gacanta ugu jiray, misana hubkaas maahayn mid ay iskaga difaaci karayeen xoogga ciidamada Talyaaniga. Taasi waxay dhalisey gadoodkii ugu horeeyey ee Soomaalidu ay ku diidayeen xeerkan. Taasi waxay ahayd diidmo ka timid bulsho Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta dhulka uu maro webiga Shabeelle. Ninka horseedey diidmadaas wuxuu ahaa Shiikh Xasan Barsane Nuur. Isagu wuxuu ahaa shiikh raacsan dariiqada Axmadiya, kaas oo si xooggan looga xushmeyn jiray degaanka uu ku noolaa.
“ Waxaa ciidankaas kaalinayay laba horin oo ku hubeysan qoryaha daran-dooriga u dhaca iyo laba madfac. Talyaanigu wuxuu ciidankaas ku weeraray tuulooyinkii kacaamay. Dagaal kulul oo saddex maalmood socdey wuxuu sababay in tuulooyinkii dhamaantood uu dab ka huriyo. Dabadeedna uu dadkii gumaado “. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 90, Muqdishow – Soomaaliya).
Muddadii u dhexeysey 29-kii – 31-kii bishii maarso 1924-kii, xooggii Talyaaniga wuxuu jebiyay Soomaalidii. Sida u caadada ahayd xoog walba oo gumeyste ah, ciidamadii weerarka ahaa, waxay gubeen aqalladii ka dhisnaa tuulooyinka iyo wixii agab ahaa oo ay dadku adeegsanayeen. Waxay gubeen beerihii, xoolihiina waa ay laayeen. Islamarkaas waxay gacanta ku dhigeen raggii gadoodka hor-kacayay oo uu kamid ahaa Shiikh Xasan Barsane. Halkii ayaa xabsiga loogu taxaabay, Shiikhii iyo saaxiibadiis. Dhowr bilood dabadeed, Xamar ayaa maxkamad lagu saarey. Bishii julay 1924-kii, Shiikh Xasan waxaa lagu xukumey 30 sano oo xabsi ah. Laba sano iyo badh ayuu ku xirnaa xabsi Xamar ku yiil. Dabadeed markey taariikhdu ahayd 28/ 1- 1927-kii Shiikh Xasan Barsane ku geeryoodey xabsiga Xamar.
26/ 10- 1926-kii, tuulada Dibley waxaa tegey nin la yiraahdo Cabdi-raxmaan Maxamad Abiikar. Isagu wuxuu ahaa odaga beelaha reer Baraawe. Waxaa la socdey shan nin oo ka tirsan ciidanka Talyaaniga. Ujeeddadu waxay ahayd, Soomaalida uu matalayay in uu oggoleysiiyo in ay u adeegaan Talyaaniga oo ay fuliyaan howl-gallada hawaanka ah. Tuulada waxaa ku noolaa oo odey ka ahaa nin wadaad ah oo la yiraahdo Shiikh Maxamad Shiikh Cabdi. Isagu wuxuu soo dhoweeyey Nabadoon Cabdiraxmaan iyo shantii askari ee la socotey. Sida caadada Soomaalidu ay tahay, meel wanaagsan ayaa loo gogley. Dabadeed halkaas ayaa martidii lagu maamuusey. Habeennimadii goortii ay seexdeen, ayaa Shiikh Maxamad wuxuu diyaarsadey rag dhallinyaro ah oo laaya askarta iyo nabadoonka la socda. Kadib markii la laayay colkii martida ahaa, Shiikh Maxamad iyo raggiisii waxay u baxsadeen saldhig ay degganaayeen xer la odhan jiray Jameecada Ceel Xaaji.
Shiikh Maxamad Cali waa uu diidey in uu u tago. Waayo horey ayuu shiikhu u necbaa gumeysiga iyo dhaqan xumidiisa. Wax badan ayuu xertiisa kala hadley in ay ku baraarugaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida ah. Masuulkii Talyaaniga ahaa mar kale ayuu dhambaalkii soo celiyay. Laakiin Shiikh Maxamad waxba iskama beddelin go’aankiisii ahaa diidmada. Markuu laba jeer diidey ayaa, Talyaanigii wuxuu soo direy taliyihii saldhigga booliiska, kaas oo la odhan jiray Marshaallo Aldo Fiorina. Taliyaha ciidan yar ayuu horey u sii kaxeystey, si uu Shiikha u soo khasbo oo magaalada u keeno. Laakiin Shiikha iyo xertiisii diyaar ayay u ahaayeen. Dood lagama sugan taliyihii, bal isaga iyo xeyntii ciidanka ahayd ee la socotey, dhamaantood waa la laayay. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 95, Muqdishow – Soomaaliya).
Nadaamkii De Vecchi, wuxuu banaadir kala kulmey halgamadaas teel-teelka ah oo tilmaanta u noqdey in Soomaalidu ayan si sahlan ugu oggoleyn in dhulkooda si sahal ah uu ku dhaxal-wareego. Intaas aanu xusney kuma ekeyn dhaqdhaqaaqa Soomaalida koonfureed ay ku diiddanaayeen nadaamka gumeysiga. Meeshii uu halgan ka joogsado, meel kale ayuu ka hillaacayay. Waxaa tusaale-dhig noqon kara kacdoonkii beesha Biyamaal ee ka horeeyey kacaamadan danbe, kacdoonkii beesha Wacdaan, halgankii suugaaneed ee Shiikh Axmad Gabyow uu guud ahaan kula hadlayay. Laakiin midnimo la’aanta heysatey halganka ayaa waxay fursad u ahayd xoogga gumeysiga, taas oo u sahleysey in uu halgan waliba meeshiisa inta ugu tago uu kaga guuleysto. Mararka qaarna, sida aanu arki doonno xoogga Soomaalida ayuu isu adeegsanayay.
Masalooyinkaan odhan jiraa malagyo keeneene
Qallinka.C.naasir Guray Meecaad.